भिडियो फिचर Archives | पथरी अनलाइन | मोफसलको खबर
गौरभको संगित र निर्देशनमा “घर फर्कौँ कसरी… ?
यथार्थ शब्दमा मनछुने संगीत भरिएको गीत ” घर फर्कौँ कसरी ” म्युजिक भिडियो सहित दर्शक माँझ आएको छ। गौरभ दर्पण ले निर्देशन गरेको उक्त गीतको म्यूजिक भिडियोमा कलाकारहरू सुदीपजङ कार्की र इन्दु कोइराला रहेका छन् । यथार्थ शब्दमा मनछुने संगीत भरिएको गीतका शब्द रचनाकार चर्चित ढुङ्गेल हुन् । गीतलाई संगीत भरेर प्राण दिने काम समेत
गायिका श्रृष्टी हिङ्माङको जितेको छु बजारमा
गायिका श्रृष्टी हिङ्माङको जितेको छु… बोलको गीत सार्वजनिक भएको छ । कृष्णउदाशीको शब्द रचना र चर्चित संगीतकार राजनराज शिवाकोटीको संगीतमा रहेको उक्त गीत सोमबार युट्युब मार्फत सार्वजनिक भएको हो । श्रृष्टी स्वयं आफैले अभिनय गरेको भिडियोमा कन्सेप्ट कवि मिलनको हो भने निर्देशन गौरभ दर्पणले गरेका हुन् । उक्त गीतको संगीत संयोजन सन्दीप कार्कीले गरेका हुन्,
‘दिलहिरा’को अनप्लग भर्सनको भिडियो सार्वजानिक
गायक रविन कन्दङ्वाको स्वर रहेको लोकप्रिय ‘दिलहिरा’ बोलको गीतको अनप्लग भर्सनको भिडियो सार्वजानिक गरिएको छ । नवराज लम्सालको शब्द तथा हरि लम्सालको संगीत रहेको सो गीतमा दिपा चाम्लिङले फिचरिङ गरेका छन् । युट्युव च्यानल ट्युल्भ नोट्स मार्फत् सार्वजानिक गरिएको गीतमा अमृत सुनुवारको छायांकन÷निर्देशन रहेको छ । २०६७ मा सार्वजानिक भएको ‘दिलहिरा’ गीति एल्वम रविनको
‘कथा काठमाण्डु’मा प्रियंका र प्रमोदको अन्तरंग दृश्य
चलचित्र ‘कथा काठमाण्डु’को एक रोमान्टिक गीत रिलिज गरिएको छ । ‘रातको कुरा’ बोलको गीतमा गायिका इन्दिरा जोशीको स्वर छ । गीतमा प्रदिप बाँस्तोलाको शब्द तथा संगीत छ । यो गीतको भिडियोमा चलचित्रका मुख्य कलाकार नायिका प्रियंका कार्की र कलाकार प्रमोद अग्रहरीलाई देखाइएको छ । गीतको भिडियोमा प्रमोद र प्रियंका निकै हट देखिएका छन् ।
नेपाली संगीतमा निशानको भुन्टी लोकप्रिय
काठमाडौँ: एपीवान टेलिभिजनको चर्चित रियालिटी शो नेपाल आइडलको पहिलो सिजनका रनरअप निशान भट्टराईले ‘भुन्टी’ नामक लोकपप गीत र म्यूजिक भिडियो लोकप्रिय बनेको छ । सार्वजनिक भएको एक दिनमै युट्युबको ट्रेन्डिङको एक नम्बरमा पुगेको यो गीतको म्युजिक भिडियोमा निशानले भुन्टेको भूमिका निभाएका छन् । निशानलाई भुन्टीको भूमिकामा चर्चित नायिका तथा मोडल एलिशा राई रहेकी छन् ।
साझ पख दर्शक दोवाटे संग
पथरी विहिवार साझ ढल्कदै थियो । पथरीको जनआन्दोलन चौकको संम्मुखमा केहि दर्शक भेला हुदै थिए । ट्रकलाई आर्कषक रुपमा सजाइएको थियो भने नजिकैको डिजेको आवाजले दर्शक तान्ने काम गर्दै थियो । केहि पुर्वाञ्चलका कलाकार स्टेजकै नजिक देखीन्थे । त्यस मध्ये निक्कै हतारोमा थिए टेलि चलचित्र दोवाटेका निर्देशक हरेन्द्र खत्रि । पथरीमा यसरी दर्शक र कलाकार
सेन्चुरीको नयाँ गीतको म्यूजिक भिडियो सार्वजनिक
असोज ३० , पथरी। संगीत क्षेत्रमा संघर्ष गर्दै अगाडी बढेका गायक राजु सेन्चुरीको नयाँ गीतको म्यूजिक भिडियो सार्वजनिक भएको छ । उनको ‘संसार छोड्न’ बोलको पहीलो म्यूजिक भिडियो हालै युट्युब मार्फत सार्वजनिक भएको हो । उक्त गीतमा शब्द अशोक लब्लीको छ भने, संगीत भिम बि.सि. को रहेको छ ।